के अझै चीन अमेरिका तनाब कम गर्न र द्वन्द बाट बच्ने ठाउ छ ? – BANKE POST
के अझै चीन अमेरिका तनाब कम गर्न र द्वन्द बाट बच्ने ठाउ छ ?
Posted on July 29, 2020 July 29, 2020 Author Hari Adhikari	Comment(0)
अमेरिका किन अप्रत्याशित रूपमा चीनको बिरूद्ध खडा भयो? के अझै चीन-अमेरिका तनाव कम गर्न र द्वन्द्वबाट बच्ने ठाउँ छ?
सन् १९७० को दशकको शुरुदेखि नै अमेरिका चीनसँग सम्पर्कमा रहेको छ र लामो समयदेखिको यस्तो सम्पर्कले ल्याएको बजार अर्थतन्त्रले आखिरमा तथाकथित राजनीतिक उदारीकरणमा पुर्‍याउँछ।हामी विश्वास गर्छौं कि यस्तो व्याख्या अमेरिकी सम्भ्रान्त वर्गको छनौट आत्म-सुशोभन, साथसाथै उनीहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकाको नैतिक परिचालन र चीनसँगको पश्चिमी संसारको टकराव हो।
सन् १९७२ मा अमेरिका-सोभियत संघ बीच शीतयुद्ध चरम विन्दुमा पुगेको थियो र यही परिस्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ले चीन भ्रमण गरेसँगै चीन-अमेरिका सम्बन्धको सुरुवात भएको थियो । शीतयुद्धले बाध्य पारेको अमेरिकाले चीनमा पुग्न पहल गर्नुपर्ने एक मात्र कारण शक्ति सन्तुलन मिलाउन थियो । त्यस बेला पनि चीनसँग पश्चिमको कडा वैचारिक मुठभेड थियो। तर पनि चीन-अमेरिका सम्बन्धको आपसी सम्बन्धले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको भौगोलिक संरचनालाई नयाँ आकार दियो र शीतयुद्धको प्रवृत्तिलाई रोक्न सफल भयो । यो वाशिंगटनको वास्तविक उद्देश्य थियो।
सन् १९७० को दशकको अन्त्यमा चीनको सुधार र खुलापन पछि, चीन र अमेरिकाले विस्तृत सम्पर्कहरू गठन गरे। तर १९८० को दशकको अन्त्यसम्म, अमेरिकाको चीनको लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्तनले सोभियत संघको बिरूद्ध बारगेनिङ चिप्स जम्मा गर्न चीनको शक्ति प्रयोग गरिरहेको थियो।
शीत युद्धको अन्त्य पछि र १९९० को दशकमा वाशिंगटनको रणनीतिक ध्यान शीत युद्धको दौरानमा भएका उपलब्धीहरूलाई पचाउन थियो। चीन, उदीयमान बजारको रूपमा स्थापित भैरहेको थियो। अमेरिकी रूढीवादी सम्भ्रान्त वर्गले कहिले पनि चीनप्रतिको वैमनस्यतालाई त्यागेको छैन, तर चिनियाँ बजारको विशाल सम्भाव्यताले त्यस्तो वैमनस्यता फैलाउन रोक्यो।
अमेरिकाको आतंकवाद विरोधी युद्ध पछि, संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रमुख शक्ति प्रतिस्पर्धा को भावना फेरि मजबूत भयो। चीनको उदय बिस्तारै अमेरिकी रणनीतिक सहिष्णुताको महत्वपूर्ण बिन्दुमा पुगेको छ। ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक प्रतिस्पर्धी ठान्छ। चीनप्रति अमेरिकी नीतिले मौलिक उत्थान गुमाएको छ।
यद्यपि हामी विश्वास गर्दछौं कि चीनको समग्र निर्दोषताले आउँदो लामो समयसम्म अवस्थाको विकासमा असर पार्नेछ। चिनियाँ जनता गरिबीबाट छुटकारा पाउन र समृद्ध हुने चाहनाबाट चिनिएको एउटा ठूलो देशको रूपमा चिनिरहेको छ। यो अमेरिका परास्त गर्न को लागी एक षडयन्त्र अभियान होईन। चीनको सैन्य विकास पनि यसको विस्तार भइरहेको रणनीतिक जोखिम र यसको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न आवश्यक अनुरूप छ।चीनको आन्तरिक मामिलामा “कडाई” भनेको मूल हितको र सार्वभौमसत्ता को रक्षा गर्ने रणनीति हो, अन्य देशलाई दमन गर्नको निम्ति होइन ।
अमेरिकाले गम्भीर रूपमा चीनको रणनीतिक उद्देश्यलाई गलत अर्थ लगाएको छ। चीन एक विशाल देश हो, र चीनको आन्तरिक मामिलाहरू देशको शासन प्रणालीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। २०१२ मा सीपीसीको १८ औं राष्ट्रिय कांग्रेसको आयोजना भएदेखि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले सरकारको शैलीमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ, सूचना उद्योगले सुविधा पुर्‍याएको छ र चीनले नयाँ ग्रामीण इलाका निर्माण, निष्पक्षता र न्यायका क्षेत्रमा पनि कदम चालेको छ। चीनले पर्याप्त रूपमा COVID-19 महामारी नियन्त्रणमा ल्याएको छ। चीनको राजनीति अभूतपूर्व स्थिर भएकै कारण चीन हरेक मामिलामा सफल भएको छ ।
अमेरिकाको आजको चीनलाई कुचल्न सक्ने क्षमता छैन, किनकि चीन पहिले नै पर्याप्त शक्तिशाली छ र यसले खतरनाक विस्तारको बाटो लिदैन। चीनको विचारधारा पश्चिमी देशहरूको विचारधारा भन्दा फरक छ, र चीनको विचारधाराले घृणाको बीउ रोप्दैन। यसैले अमेरिकाले चीन विरोधी शिविर बनाउन प्रयास गर्दा प्रतिरोधको सामना गर्नु परेको छ। अन्ततः अमेरिका स्वयम् पराजित हुनेछ, किनकि हामीलाई थाहा छ यो विस्तारवाद को समय होइन र दमनकारी नीति समाप्त हुन्छ। लेखक- शिबराज कार्की
११ एसपी एसएसपी मा बढुुवा
Posted on January 13, 2021 January 13, 2021 Author Hari Adhikari
काठमाडौं ,पौष २९– नेपाल प्रहरीका ११ जना एसपीहरु एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन् । आज बसेको बढुवा समितिको बैठकले ११ एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो ।गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बढुवा समितिको सचिवालयले जारी गरेको सूची अनुसार एसपी कृष्णकुमार महत, गोविन्दकुमार शाह, उमाशंकर पञ्जियार, अर्जुन चन्द ठकुरी, जनकराज पाण्डेय, सुरेन्द्रप्रसाद मैनाली, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, […]
दाहसंस्कार गरिसकेपछि रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ आयो
गुलरिया,२भदौ : कोरोना संक्रमणबाट बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका–९ का ७८ वर्षका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ ।बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीका अनुसार नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मंगलबार निधन भएका उनको घर ल्याएर दाहसंस्कार गरिसकेपछि कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।‘कोरोना रिपोर्ट नआउँदै शवको दाहसंस्कार भएछ । मलामी गएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा […]
उग्र राष्ट्रवादले आर्थिक लक्ष्य अवरोध गर्दछ।
के चीन अमेरिका को असफलता बाट खुशी छ ?
कोरोनाबाट धेरै मृत्यु हुनेमा बाँके जिल्ला १ नम्बरमा
Posted on October 4, 2020 October 4, 2020 Author Hari Adhikari
चन्द आज बाट सार्वजनिक भए
Posted on March 5, 2021 March 5, 2021 Author Hari Adhikari